မြမြ ဝိညာဉ် နောက်တစ်ယောက်ကို ဝင်ပူးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာပြီ...! - Thadin
HomeNEWSမြမြ ဝိညာဉ် နောက်တစ်ယောက်ကို ဝင်ပူးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာပြီ…!
မြမြ ဝိညာဉ် နောက်တစ်ယောက်ကို ဝင်ပူးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာပြီ…!
April 23, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မြမြ ဝိညာဉ် နောက်တစ်ယောက်ကို ဝင်ပူးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာပြီ…!
နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့က အမျိုးသမီးတဦးအား ၀င်ရောက်ပူးကပ်ကာ မိမိမှာ လူသတ်အလောင်းဖျောက်ခြင်းခံထားရသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည့်
မြမြဆိုသူမိန်းကလေး၏၀ိညာဉ်သည် ယနေ့ ဧပြီ ၂၃ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံဝင်းအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတဦးအား ထပ်မံပူးကပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်
ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံသည် ဝန်ထမ်းအင်အား (၁၄၀၀)ဝန်ကျင်းရှိပြီး သင်္ကြန်အတွင်း စက်ရုံဖွင့်ပိတ်ထားသောကြောင့် စက်ရုံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့် ဧပြီ (၂၃) ရက်နေ့တွင် မမြမြဆိုသည့် ဝန်ထမ်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးနေချိန်တွင် စက်ရုံဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတဦးအား ထပ်မံဝင်ရောက်ပူးကပ်ခြင်းဖြစ်သည်
နှဈဆနျး ၁ ရကျနကေ့ အမြိုးသမီးတဦးအား ဝငျရောကျပူးကပျကာ မိမိမှာ လူသတျအလောငျးဖြောကျခွငျးခံထားရသညျဟု ပွောဆိုခဲ့သညျ့
မွမွဆိုသူမိနျးကလေး၏ဝိညာဉျသညျ ယနေ့ ဧပွီ ၂၃ ရကျ နလေ့ယျပိုငျးက ကြောကျစိမျးဖိနပျစကျရုံဝငျးအတှငျးရှိ အမြိုးသမီးဝနျထမျးတဦးအား ထပျမံပူးကပျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ
ကြောကျစိမျးဖိနပျစကျရုံသညျ ဝနျထမျးအငျအား (၁၄၀၀)ဝနျကငျြးရှိပွီး သွင်ျကနျအတှငျး စကျရုံဖှငျ့ပိတျထားသောကွောငျ့ စကျရုံပွနျလညျဖှငျ့လှဈသညျ့ ဧပွီ (၂၃) ရကျနတှေ့ငျ မမွမွဆိုသညျ့ ဝနျထမျးရှိမရှိကိုစဈဆေးနခြေိနျတှငျ စကျရုံဝနျထမျးအမြိုးသမီးတဦးအား ထပျမံဝငျရောကျပူးကပျခွငျးဖွဈသညျ
“ညစ်ပတ်နေတဲ့…. ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံးကို… အလွယ်ကူဆုံးသန့်ရှင်းနည်း”
အပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့် စားဖို့ဝယ်လာတဲ့ ဘဲဥ ၂၄ လုံး အကောင်ပေါက်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်…!
This Month : 40246
This Year : 235644
Total Users : 594668
Total views : 2730188